(Waxaa laga soo toosiyay Beero)
Kani waa maqaal ku saabsan beeraha. Maqaalo kale fiiri "beero". Haku khaldin beer noole ee xayawaanka.
Beer, Beero (wadar) (ingiriis: agriculture; carabi: زراعة) waa nidaamka abuurida, korinta, xanaaneynta iyo soo saarida dhir laga sameeyo cunto, dhar, daawo, hooy iyo guud ahaan manafaac taageera nolosha dadka, xoolaha, xayawaanka iyo inta ku tiirsan. Beeruhu waa aasaaska nolosha iyo jiritaanka nolosha, iyo barta ay ka soo uunkantey horumarka xadaarada aadamaha. Waxa jira noocyo badan oo beero ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxak ale oo ay kakooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee.
Beer lagufalayo Dibi Wadanka Indunisiya
2 Gobollada Beereedka Soomaaliya
3 Dalagyada aad loo Beero
4 Nidaamka Qodaal Masno
5 Mashaariicdii Horumarinta Beeraha
6 Dhoofinta Waxsoosaarka Beerah
7 Barashada Culuunta Beeraha
8 Mashruuca Suuqgaynta Xoolaha iyo Qodaal Masno
Soomaalidu waxay beeraha u taqaannaa dhulka lagu beerto dalagyada loogu tala galay in laga dhigto cunto, laakiin waxaa soo galaaya dhaqashada xoolaha. Cilmiga barashada beeraha waxaa loola jeedaa barashada dhirta la beerto iyo xoolaha labadaba.
Beeraha Soomaaliya ugu wax soo saarka badanni waxay dhacaan dhul beeraadka ku yaal labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba.
Gobollada Beereedka Soomaaliya
Gobollada Beeraha caanka ku ah waxey intooda badan dhacaan koonfurta Soomaaliya sida Gobollada Shabeelaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Gedo,Bay,Bakool, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Waxaa kaloo jira gobolka Hiiraan oo asagana ku yaala bartamaha soomaliya in dadka badankooda ay wax soo saarkooda uu ku tiirsanyahay beeraha.
Dalagyada aad loo Beero
Dalagyada aad loo beerto guud ahaan Soomaaliya iyada oo aan siday u kala badanyihiin aanan loo soo qorin waxaa ka mid ah: galay, masago, qamadi, digir, moos, liin, babaay, canbe, qare, basal, sisin, bocor, barbarooni, dabacaseeye, baradho (gobolka Bay), tuun, saytuun bariis iyo mirro kale.
Dalagyada intaaan ka aheyn dhowr dalag sida liinta iyo cambaha, waxay beeraha badiyaa ku baxaan 3 bilood, ugu badanaan 5 bilood.
Geedaha cambaha waxay ku mirro dhalaan mudo ugu yaraan 5 sano ah. Liinta waa la mid. Geedka cambaha labo dhinac ayuu ka mirro dhalaa; dhan xili dhanka kalane xiliga xiga.
geedka muuska oo isgu ka mida dalaagyada aay Soomaaliya ku caanka tahay ayaa wuxu aad uga baxaa konfurta Soomaaliya wanaa mid ka mida dhirta aay aadka u beeran somlida garahaan konfurta isago waliba noocya.
bariiska ayaa isguuna ka mida dalagyada ka soo baxaa dhulka soomalida inkastu uu yar yahay xadigay soo saraan haddana wa mid ka mida dalagyada soo ka soo baxa gaar ahaan bartamaha somaliyo iyo qayb ka mida waqoyiga oo hadda laga bilaabay beeritanka bariiska.
Nidaamka Qodaal Masno
Qodaal masno oo ah wax ku cusub beeralayda Soomaaliyeed ayaa ah habka midaynta dalaga iyo xoolaha nool. Wadamada caalamka intooda badan ee leh dhulbeeraad isla markaana xoolaha dhaqda, beeralaydooda way mideeyaan falashada beeraha iyo xanaaneynta xoolaha nool sida lo'da iyo digaag oo sahal u ah in lagu xanaaneeyo beerta dhexdeeda ama agteeda.
Hilib iyo caano ayaa loo xanaanayn karaa xoolaha sidaas oo kale lagu dhafo beerta. Badiyaa lo'da dhul biyo badan kama maaranto sidaas darteedna ay sahal u noqon karto maaraynta beer iyo tiro lo' ah.
Beeralayda soomaaliyeed waxay hal-bowle dhaqalaha u yihiin wadanka. wax yaabaha kasoo baxa qayb waxaa lagu isticmaalaa waddanka gudiisa, qaybta kalena waa ladhoofiyaa, halkaas oo laga helo lacag adag. Boqolkiiba-sagaashan (90%) Lacagta adag ee Soomaaliya soogasha waxaa laga helaa xoolaha nool iyo beeraha .
Mashaariicdii Horumarinta Beeraha
Dowladii Kacaanka oo adeegsanayso wasaarada Beeraha Soomaaliya iyo wakaaladaheedii, waxay dadaal farabadan galisay kobcinta waxsoosaarka wadanka. Waxaa la hormariyay beerihii ku yiilay dhulbeeereedka wadanka ee ku yaal wabiyaa laga soo bilaabo Jowhar, Jilib, Baardheere ilaa Luuq.
Mashaariicda Dawladda ay ansixisay waxay iskugu jireen kuwo cilmiga beeraha kor u qaadayo iyo fidinta beeraha iyo badinta dalagyada ku saabsanaa.
Dejintii dadkii laga soo raray Abaartii Dabadheere ee 1974 degmooyinka Hobyo iyo Caynaba ayaa qoysas badan oo ka mid ahaa la baray beerofalashada.
Dhoofinta Waxsoosaarka Beerah
Dawladda Soomaaliya ka dib markii ay qaramaysay hantidii wadanka ee gumaystaha maamulayay, ayaa dhowr sano gudahood waxay Dawladda suuqiyo cusub u iibgaysay dalagyadii saa'idka (surplus) ku noqday wadanka. Intii ka horaysay 1970yadii, wadanka Talyaaniga unbaa qaadan jiray inta badan waxyaabaha sida aadka ah loo dhoofiyo sida mooska.iyo haraga (maqarka)
Barashada Culuunta Beeraha
Jaamada Ummada laanteeda Beeraha ee Kulyada Beeraha Lafoole ama Agrario ayaa qayb libaax ka qaaadatay helitaanka farsamo cusub oo la xariirta beeraha. Waxaa maanta dalka ka jirta, nasiib wanaag, Jaamacadda Shabeelle, Kulliyadda Beeraha oo ay asaaseen waxna ka dhigaan barayaal ka soo baxay Agrario, lehna taqasusyo kala duwan: sida Prof. Hiraabe oo ah Hormuudka Kulliyadda, Prof. Shirwac, Prof. Jimcaale, Prof. Caseyr, Prof. Suufi, Prof. Xanafi, Prof. Hadaafow, Guure iyo kuwo kale oo si tabarruc ah ardada wax u bara. Mustafe maxamed|2.90px|thumbnail|ganacsade]]
Mashruuca Suuqgaynta Xoolaha iyo Qodaal Masno
Wasaaradaha Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha ayaa Dawladda Dhexe ee Soomaaliya ugu mas'uul ahaa tan iyo horaantii warshadaynta qaranka ee 1970yadii- waxaa la aas aasay Warshadii Hilibka ee Kismaayo iyo rugo kale oo badan oo kor u qaaday nolosha qoysas badan oo beeralay iyo xoolo dhaqato ah.
Webiga Jubba iyo Shabeelle aagaga beeraha ayaa waxaa laga hirgeliyay mashaariic muhiim ah sida Mashruuca Waraabka Mogambo, Mashruuca Beeraha Bariiska Muuri ee Baardheere iyo xarumihii ADC (Agricultural Development Centers) ee Jowhar ilaa Luuq 1985-1987.
Hordhac Ku Saabsan Beeraha Soomaaliya Soomaalidu waxay beeraha u taqaannaa dhulka lagu beerto dalagyada loogu tala galay in laga dhigto cunto, laakiin waxaa soo galaaya dhaqashada xoolaha.
Cilmiga barashada beeraha waxaa loola jeedaa barashada dhirta la beerto iyo xoolaha labadaba.
Beeraha somaliya ugu wax soo saarka badanni waxay dhacaan dhul beeraadka ku yaal labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba.
Beeraha Bedka Soomaaliya oo ah 63.8 million hecters [hektar] waxaa beerista ku haboon siddeed-meelood-oo-meel [1/8] ama 8 million hektar. Waxaase labeeri jirey in yar oo keli ah.
Meelaha beeraha ugu haboon ee Soomaaliya waa inta ku xeeran labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ee koonfurta Soomaaliy. Qiyaastii labada webi iyo dhexdooda waxaa beerista ku haboon 7.5 million hektar.
Inkastoo aan si weyn loo beerin dhulka ku haboon beerista, hadana beeruhu waxay Soomaaliya ka yihiin hal-bawlaha dhaqaalaha ee waddanka. Waxyaabaha kasoo baxa beeraha, qayb waxaa lagu isticmaalaa waddanka gudiisa, qaybta kalena waa ladhoofiyaa, halkaas oo laga helo lacag adag. Boqolkiiba-sagaashan (90%) Lacagta adag ee Soomaaliya soogasha waxaa laga helaa xoolaha nool iyo beeraha .
Waxyaabaha kasoo go’a ama ka baxa beeraha Soomaaliya waxaa kamid ah: Moos[muus], cambe, liin-macaan[liin-balbeelmo], liin-dhanaan, galley, haruur[masago], babaay, sonkor[qasab], qare, seytuun, canab, rumaan, raqay[xamar], baradho, bataato, cudbi[suuf], yaanyo, dabacase[kaarooto], sisin[sinsin], iyo weliba qudaar [khudaar] kala gedgedisan aad ubadan.
laakin su”aasha meesha taala oo ah yaa ka faa idaysanaayo dhuulkaan saan ubarwaaqo ah oo ku fican dhan walbo beeraha iyo xoolda nool Magaalooyinka Soomaaliya ee ku xeeran labada webi, beeridana ku haboon waxaa kamida: Beledweyne, Jawhar, Balcad, Afgooye, Baardheere, Shalambood, Jilib, Jamaame iyo Kismaayo iyo kuwo kale oo fara badan.
Marka laga reebo labada webi, meelaha kale ee ku haboon wax beerista waxaa kamida; gobolka Baay, gobolka Bakool gobolka Waqooyi-galbeed, halkaas oo cimilada iyo dhulkuba ku haboonyahay beerista. Dhanka gobolka Bari waxaa kabaxa timirta. Geedka timirtu waa geed ku haboon cimilada kulul.
Roobka ku da’a Soomaaliya oo aad ubadneen marka qaar awgeed, badanaa soomaalidu wax kama beertaan wixii kabaxsan labada webi.
Meelaha ugu badan ee ay beertaan dadka somaliyeed waa inta udhaxaysa labada webi wixii kasoo hara waxaa labeeraa oo kaliya waqtiyada roobka waxaana kubadan tusale ahaan gobolka Baay, gobolka Bakool iyo kuwo kale dadka kunool waxay beerahooda beertaan waqtiga roobka oo kaliya, waana sababtaas midda ay soomaalidu u dhaqdaan xoolaha.
Waayo waxaa u sahlan [reer guuraaga] in ay u guuran hadba meeshii uu kada”o roobka maxaa yeelay dadka badankood waa xoolo dhaqato iyo beeralay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Beer&oldid=201745"
Last edited on 3 Juun 2020, at 23:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Juun 2020, marka ee eheed 23:41.